သွင်းကုန်အမယ် ၅၀ ကျော်အားအခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် အိန္ဒိယအစိုးရက စီစဉ်လျက်ရှိ ~ Myanmar International Trade Center
Myanmar International Trade Center
International Trade Fair in Myanmar
2020 Trade Fairs Calendar
Visa Extension Online
Export Import Facilitation Services
Exporter/Importer Registration Certificate
Recommendations from other Departments
Introduction of Myanmar National Brand
Myanmar National Brand-MNB Application
Myanmar Exporters Club
Booking for Co-working Space
International Trade , Trade News
သွင်းကုန်အမယ် ၅၀ ကျော်အားအခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် အိန္ဒိယအစိုးရက စီစဉ်လျက်ရှိ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလမှစတင်မည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်း လျက်ရှိသည့် ကုန်စည်အမယ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အပေါ် သွင်းကုန်ခွန်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ရန် အစိုးရက စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ သတင်းဌာနများမှ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရသည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ရသုံးမှန်းခြေ အစီရင်ခံစာကို ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်း၌ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ရာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း ကျဆင်းနေမှုအား ပြန်လည် မြင့်တက်လာစေမည့် ပြောင်းလဲမှုများကို လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းစက် ကဲ့သို့သော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတုထုတ်ကုန်များနှင့် ပရိဘောဂ၊ ဖယောင်းတိုင်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာစသည့် လက်မှုပစ္စည်းများ အပါအဝင် ကုန်စည်အမယ်များစွာကို
သွင်းကုန်ခွန် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာရှိများပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီအဖွဲ့တစ်ရပ်၏ ထောက်ခံတင်ပြချက်အရ အိန္ဒိယအစိုးရသည် သွင်းကုန်အခွန်အား ၅% မှ ၁၀% အထိ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် ကုန်စည်အမယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးကြီးတင်သွင်းကုန်မဟုတ်သော ကုန်စည်များ တင်သွင်းမှုကို လျော့ချရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ ဤသို့အခွန် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် ကုန်သွယ်ရေးသဘော တူညီချက်များအရ အခွင့်အရေး ရရှိနေသောနိုင်ငံများထံမှ ဈေးနှုန်းချိုသာသည့် ကုန်စည်များ တင်သွင်းမှုအား ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ကိုင်နေရသော ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထောက်အပံ့ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများမှ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိ (၂) ဦးမှ ၎င်းတို့သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားကြောင်း Economic Times သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြသည်။
တန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၅၆ ဘီလီယံ ခန့်ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည်များနှင့် အခြားဒေသများမှ ကုန်စည်များတင်သွင်းမှုကိုလျော့ချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယခုကဲ့သို့ သွင်းကုန် အချို့အပေါ် အကောက်ခွန်နှုန်းထားတိုးမြှင့်မှုအား ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း၌ လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် IKEAလုပ်ငန်းစု ကဲ့သို့သောအိမ်တွင်းသုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းလျက်ရှိသော စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်မှု ရှိလာနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများပါဝင်သည့် ကော်မတီသည် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင် များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ မူလကတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံရှိသည့် ကုန်စည်အမယ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ကို သွင်းကုန်ခွန်တိုးမြှင့်ရန် စာရင်းပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိကာလ၌ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်များမှာ အကောက်ခွန်လိုင်းရှိ ကုန်စည်များ၏ ၁၀% အောက်တွင်သာရှိရာ အိန္ဒိယအစိုးရသည် သွင်းကုန်များအပေါ် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုများအား သီးခြားဆောင်ရွက်ရန် ကိုလည်း စဉ်းစားလျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၌ လျှပ်စစ်နှင့်လောင်စာဆီတို့ပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရမှုအတွက် ညီမျှမှုဖြစ်စေမည့် Border Adjustment Tax ခေါ် နယ်နိမိတ်ခြားနားမှုအရ ကိုက်ညှိကောက်ခံသည့်အခွန်အား သွင်းကုန်များအပေါ် ကောက်ခံနိုင်ရေး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း မထုတ်ပြန်မီကာလအတွင်း ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန တို့အကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် နာရင်ဒရာမိုဒီ ဦးဆောင်သည့် အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဏာရရှိ လာချိန်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေ ကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်နေမှုကို လျော့ချနိုင်ရန် သွင်းကုန်များအပေါ် အခွန်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်လျက် တစ်ဖက် တွင်လည်း ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဧပြီလမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းနှစ်အလိုက် ကာလတူနှိုင်းယှဉ်ပါက ပို့ကုန်၌ ၂% ကျဆင်းမှုရှိနေသော်လည်း သွင်းကုန်တန်ဖိုးတွင် ၈.၉% လျော့ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကုန် သွယ်မှုလိုငွေ ပမာဏသည် ယမန်နှစ်ကာလတူ၌ ဒေါ်လာ ၁၄၈ ဘီလီယံရှိရာမှ ယခု ဒေါ်လာ ၁၁၈ ဘီလီယံသို့ ကျဆင်း ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Source: India likely to raise import duties on more than 50 items in Budget, 27 Jan 2020, Economic Times
Exhibitors Form>>> ......................။...................... Visitors Form>>>
Visa Extension Application
Visa Extension (Online)
Proposal Form for Participants
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသောကာလအတွ င်း ရောဂါကာကွယ် တားဆီးရေး နှင့် ကုသရေးအတွက် လိုအပ်သောဆေးများ ပြည်ပမှဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် အခက်...
Copyright © Myanmar International Trade Center
Address: No. 622/626, Merchant Road, Pabedan Township,Yangon, Myanmar. | Phone: +95-1-385323. | Email: mitcmyantrade@gmail.com,mitc.ygn@gmail.com